Manchester United & Bayern Munich Oo Dalbaday Gareth Bale iyo Lacagta Real Madrid Ku Iibinayso Oo Sare U Kacday – GOOL24.NET
Manchester United & Bayern Munich Oo Dalbaday Gareth Bale iyo Lacagta Real Madrid Ku Iibinayso Oo Sare U Kacday
Kooxda kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Manchester United ayaa Real Madrid hor dhigtay dalab ay ku doonayso weeraryahanka baasha ka ciyaara ee Gareth Bale.
Wargeyska El Confidencial ee xaruntiisu tahay waddanka Spain ayaa shaaciyey inuu ogaaday in Manchester United ay miiska u saartay Real Madrid dalab ay kaga doonayso xiddiga reer Wales, kaas oo ay doonayso inay isku xoojiso.
Caddadkii soo baxay maanta oo khamiis ah ee wargeyska El Confidencial ayaa waxa uu ku sheegay in Manchester United oo ka faa’iidaysanaysa hadalkii Bale ku sheegay inaanu ku faraxsanayn wakhtiga laga siiyo Real Madrid, ay ka dalbatay Real Madrid inay ka iibiyaan, taas oo aan la ogeyn jawaabta ay kala kulmi doono.
Faahfaahinta dalabka Manchester United
Sida uu wargeysku qoray, Manchester United waxay u ballan-qaadday Gareth Bale inay sannadkii mushahar u siin doonto 35 milyan oo Euro oo ka dhigaysa laacibka ugu mushaharka badan horyaaalka waddanka Ingiriiska, taas oo tababare Jose Mourinho uu ku qancay, kuna guubaabiyey United in iyadoo ka faa’iidaysanaysa xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya Madrid inay ka shaqayso iibka Bale.
El Confidencial waxa uu intaa ku daray in qiimaha Gareth Bale uu ka bilaabmay 120 milyan oo Euro, hase yeeshee markii uu laba gool dhaliyey ciyaartii finalka Champions League, uu madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez kor u dallacay lacagta lagu iibinayo Bale oo uu ka dhigay 150 milyan oo Euro.
Bayern Munich Oo dalab keentay
Wargeyska El Confidencial waxa kale oo uu shaaciyey in kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay dalab u gudbisay wakiilka Bale oo lagu magacaabo Jonathan Barnett, taas oo doonaysa in United ay kula loollanto saxiixa xiddiga reer Wales.
Bayern Munich ayaa u sheegtay Barnett in Gareth Bale uu farxad iyo degganaansho ka badan uu ka heli doono Jarmalka marka la barbar dhigo Manchester United.